WhatsApp yakagadziridzwa uye ikozvino tinogona kutumira hofori emoji | IPhone nhau
WhatsApp yakagadziridzwa uye ikozvino tinogona kutumira hofori emoji
Kwemaawa mashoma, isu tatova ne vhezheni itsva yeWhatsApp. Kusiyana nezvimwe zvakawanda zvazvino uno zvekushandisa mameseji akashandiswa pasi, runyorwa rwezvinhu zvitsva mushanduro nyowani harungobatanidze zvinyorwa "zvigadziriso zvebug", izvo zvinowanzotimanikidza kuti tiongorore kunyorera kuti tiwane isu nhau, kana kwete iyo inopa runyorwa rwemashoko pakati payo iyo hofori emoji inomira.
Apo Apple yakaunza iOS 10 uye ikataura nezve gumi yazvino zvitsva, yaitaura nezvayo iMessage uye nekuvandudza kwayo kukuru kwakawedzerwa kune avo vakagamuchirwa gore rapfuura. Imwe yeiyi gadziriso yaive katatu yakakura emoji uye pandakangotanga iyi ruzivo ndakafunga kuti yaingova nyaya yenguva izvi zvisati zvaitika. Zvinotaridza kuti yekutanga kukura emoji yave iri WhatsApp.
Chinyorwa chemashoko akaisirwa muWhatsApp 2.16.7
Kana iwe ukatumira emoji imwechete, ichaonekwa yakakura.
Paunenge uchinyora vhidhiyo, tsvedza munwe wako kumusoro kana pasi kuti uswededze
Nekutepa Hora kumusoro kweiyo Chats hwindo, unogona kusarudza akawanda machats kuti uchengetedze, kudzima, kana kumaka sekuverengwa.
Chats izvozvi zviri kukurumidza kuvhura.
Kune rimwe divi, ndakaverenga zvisina kujeka nhau rondedzero yaiti mamwe mabasa mazhinji akaverengerwa, kunyangwe mazhinji acho asina kuvhurwa mushanduro iyi nyowani. Mimwe yemitambo iyi ndeiyi:
Itsva UI ye WhatsApp / Zvirongwa / Ruzivo uye rubatsiro.
Kuvandudzwa kwemashoko ezwi.
Vhidhiyo player inovandudza.
Tsigiro yeGIFs uye yavo auto-playback (yakaremara).
Iye zvino inoziva kana tikashandisa WhatsApp webhu kana WhatsApp desktop uye saka tinozviona mumamiriro eWhatsApp.
Wakawedzera chiratidzo chePeek kana uchitsvaga pikicha yekutumira.
Yakawedzera yakataurwa meseji seyakavanzika basa.
Kuverenga zvese izvi, zvinoita sekunge iyo yekuvandudza iri yakakosha kupfuura zvayaitaridzika pakutanga, asi isu hatigone kuita zviviri zvezvinhu zvatinoda zvakanyanya: fonera vhidhiyo uye utumire maGIF. Chero zvazvingava, zvinoita sekunge tiri kuswedera padyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp yakagadziridzwa uye ikozvino tinogona kutumira hofori emoji
Vakagadzirisa huwandu hweMac… (?)
Vakagadzirisa zvakare nzira yekuwedzera vatori vechikamu mumapoka
Zvakare dambudziko rekurangarira rinozadza roga mashiripiti rinoitika kwandiri.
Mumwe munhu zvinoitika? Ndinovimba ivo vanoburitsa yekukurumidza chengetedzo yekuvandudza. Ndadya maGb matatu .Mumwe mangwanani
Iyo emoji yemoyo ine kufamba uye kurova, asi zvakatoita mune yapfuura vhezheni yeWhatsApp.
Zvinotendwa kuti vanhu veWhatsApp vari kuisa mabhatiri, yaive nguva
Ini ndinoshandisa Kakaotalk futi uye ivo vanga vatove nemaEmoji mahombe, asi ivo vaive vechishandiso chaicho, kwete iwo maunicode ari pabhodhi
Iyo iPhone ine iris scanner inogona kusvika muna 2018
Jailbreak kana kwete, ndiwo mubvunzo